Iindaba -Ungayenza njani ukuba ilahleko yesitshixo semoto?
Qwalasela isitshixo esitsha
Ukuba ukhetha ukuxhobisa isikhululo sokulungisa ngesitshixo esitsha, kuya kufuneka unikeze isithuthi kunye nesazisi somnini. Ngokweemodeli ezahlukeneyo, isikhululo sokulungisa sidinga ukuba umnini asinike isitshixo sokumisela isitshixo esinemivo eli-17. Le phaswedi ayisiyo inombolo yamazinyo, kodwa iphasiwedi inikwa umnini xa uthenga imoto entsha. Kweminye imodeli, isikhululo sokugcina sinika umenzi wemoto isiqinisekiso semoto kunye nomnini. Umenzi ubuza iphasiwedi yokulwa nokubiwa kwesitshixo sokumiliselwa kwisiseko sedatha aze ayithumele kwisikhululo sesondlo.
Emva kokufumana le-password, isikhululo sokulungisa sifuna ukuba umnini anike inombolo yamazinyo ephambili ukulungiselela isitshixo esitsha sentsimbi. Ukuba akukho nombolo yeprofayili yezinyo, ungabuza inombolo yeprofayili yezinyo kwiziko ledatha. Kwangelo xesha, isikhululo sokulungisa sinokuguqula iiparameter zebhodi esekhompyutheni ukuseta isitshixo semoto esilahlekileyo njengesitshixo esingekho mthethweni, kodwa kuphela ukuba imoto ayinakuqaliswa, kwaye isitshixo esilahlekileyo sisenokuvula umnyango. abanini: Nje ukuba isitshixo semoto sifumaneke ukuba silahlekile, nokuba isitshixo esitsha siqwalaselwe, kuya kufuneka ulumke ungagcini izinto zexabiso emotweni.
Nceda ubeke endaweni yokutshixa isithuthi ngokuthe ngqo kwisikhululo solungisoKusekho umngcipheko wokuphulukana nomxholo wemoto xa utshintsha isitshixo, ukutshintsha iqhaga kuya kuwuphelisa lo mngcipheko ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, iindleko zokutshintsha iqhaga likhulu kakhulu kunesitshixo esitsha, ngokuxhomekeke kwimodeli eyahlukeneyo kunye nemoto, izitshixo zahlukile. Ezinye iimodeli zisebenzisa isitshixo esifanayo emnyango, umnyango weempahla, ucango lweglavu kunye nekepisi yetanki. Ngeli xesha, ukuba lonke isitshixo sithuthi sithathelwe indawo, izitshixo ezifuna ukutshintshwa ziyathelekiswa.
Ngokubanzi, iindleko zizonke zesitshixo esitsha ziyahluka ukusuka kwi-300 yuan ukuya kwi-2,000 yuan, kodwa iindleko zokuvuselela ukuvala imoto inokuba zihlandlo ezi-4 ukuya kwezi-5 zokutshintshwa kwesitshixo, kwaye ukutshintshwa kwesitshixo kuhlala kunjalo Akukho ngaphakathi ubungakanani benkampani yeinshurensi, ke iindleko ziphezulu.
Ngokubanzi, isitshixo esitsha sinokuxhotyiswa ngeeyure ezimbalwa, kodwa ezinye iimodeli zodidi oluphezulu zifuna ixesha elininzi, kuba ezinye iimoto zokungenisa ezisezantsi kufuneka zigqibe inkqubo yokukhangela kunye nokulahla isitshixo sokuqala kwindawo yemveliso. Iimoto eziphezulu zinamanqanaba aphezulu okuqhekeka kwephasiwedi kunye nokuthelekisa kunye namaxabiso aphezulu.